Inona avy ireo fanontaniana tokony hovalian'ny zanako (ary iza amin'ireo no tokony hapetraka)? - Fiofanana kognitive
Inona avy ireo fanontaniana tokony hovalian'ny zanako (ary iza amin'ireo no tokony hapetraka)?
Ianao izao: Home » Articles » fiteny » Inona avy ireo fanontaniana tokony hovalian'ny zanako (ary iza amin'ireo no tokony hapetraka)?
Ity latabatra ity dia mampiseho ny fahaiza-manao mifandraika amin'ny hevi-dehibe amin'ny fiteny. Mazava ho azy fa misy karazany isan-karazany ny ankizy. Na izany aza, ny fahasamihafana lehibe loatra amin'ireo dingana ireo dia mety ho antony hanatonana mpitsabo manokana.
Fanontaniana tokony ho hainy valiana
Fanontaniana misy hoe "aiza". Ohatra: aiza ny baolina? (valiny manondro ny sarin'ny baolina eo amin'ny boky)
Fanontaniana misy hoe "inona izany?" mifandraika amin'ny zavatra mahazatra
Eny / tsia valiny fanontaniana, mandohalika na mihifikifi-doha
Manondro ireo zavatra fariparitana, ohatra, manondro satroka rehefa manontany hoe "Inona no apetrakao amin'ny lohanao?"
Mamaly fanontaniana tsotra momba ny hoe, ahoana, oviana, aiza ary nahoana
Mamaly ny fanontaniana toy ny "Inona no ataonao rehefa mahatsiaro mangatsiaka ianao?"
Mamaly fanontaniana toy ny hoe "Aiza ...", "Inona izany?", "Inona no ataonao ....?", "Iza no ...?"
Mamaly na mahazo fanontaniana toy ny "Fantatrao ve ...?"
Mamaly fanontaniana sarotra kokoa amin'ny "Who", "Why", "Where" ary "How"
Mamaly ny fanontaniana amin'ny "Inona no ataonao raha?", Toy ny "Inona no ataonao raha avy ny orana?"
Izy io dia mamaly ireo fanontaniana mifandraika amin'ny asan'ny zavatra, toy ny "Inona ny sotro?", "Fa maninona isika no manana kiraro?"
Mamaly fanontaniana amin'ny "Rahoviana"
Mamaly ny fanontaniana amin'ny "Firy?" (rehefa tsy mihoatra ny efatra ny valiny)
Fanontaniana tokony ho azony apetraka
Atombohy ny fampiasana ny endrika fakana am-bavany, manomboka amin'ny "Inona izany?"
Ampiasao ny pitch miakatra
Mametraka fanontaniana izy - eny fa na dia ny notsorina aza - mifandraika amin'ny filàny, ohatra "biscuit aiza?"
Mametraka fanontaniana amin'ny "Aiza?", "Inona?", "Inona no ataony?"
Mametraka fanontaniana tsotra amin'ny "Fa maninona?"
Rehefa mametraka ny fanontaniana dia ampiasao ny "What", "Where", "When", "How" and "By Who"
Mametraka fanontaniana amin'ny "A / a ...?"
Manontany ireto fanontaniana manaraka ireto amin'ny fampiasana ny firafitry ny fitsipi-pitenenana marina: "Te ..." + infinitive, "Can you ...?"
Nandika sy namboarin'i: Lanza and Flahive (2009), LinguiSystems Guide to Communication Milestones
Ao amintsika Fiteny GameCenter hahita hetsika am-polony maimaim-poana amin'ny fiteny an-tserasera an-tserasera ianao
Ao amin'ny pejy kiheba hahita karatra maimaimpoana an'arivony mifandraika amin'ny fiteny sy ny fianarana ianao
mahatakatra fanontaniana ny zaza, mamaly fanontaniana ny ankizy, fanontanian'ny zaza, fiteny, fampivoarana ny fiteny
Inona avy ireo fanontaniana tokony hovalian'ny zanako (ary iza amin'ireo no tokony hapetraka)?2020-11-052020-12-28http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngFiofanana aretin-tsainahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2020/11/ezgif-3-fd7065ffb83c.png200px200px
Firy ny teny tokony ho fantatry ny zanakao (miankina amin'ny taona)fiteny
Hamafiso ny fitadidy miasa hanatsarana ny fitenyLahatsoratra, fiteny, fitadidy miasa